ဗာရနျးနဲ့ပတျသကျပွီး မှတျခကျြပေးခဲ့ဖူးတဲ့ မျောရငျဟိုနဲ့ စီရျောနယျလျဒို – the One Sports Journal
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ရီးယဲလျအသငျးနောကျခံလူဗာရနျးကို ချေါယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပွီဖွဈပွီး ဗာရနျးဟာ အခုတဈပတျအတှငျး အသငျးမှာဆေးစဈမှုခံယူပွီးတော့ စာခြုပျခြုပျဆိုသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အသကျ(၂၈)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈသူ ဗာရနျးဟာ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ခနျြပီယံလိဂျ(၄)ကွိမျ၊ လာလီဂါ(၃)ကွိမျအပါအဝငျ ဆုဖလားပေါငျး(၁၈)ခုအထိရရှိခဲ့သလို ပွငျသဈအသငျးနဲ့လညျး ၂၀၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုဆှတျခူးခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးနောကျခံလူတဈဦးအဖွဈ သတျမှတျခံထားရတာကွောငျ့ သူ့ကိုချေါယူနိုငျလိုကျတာက ယူနိုကျတကျအသငျးခံစဈအတှကျ အကြိုးအမြားကွီးရှိစတောအမှနျပါပဲ။
ဗာရနျးရဲ့ခွစှေမျးနဲ့ပတျသကျလို့ ဘောလုံးလောကရဲ့နာမညျကြျောတှဖွေဈတဲ့ နညျးပွမျောရငျဟိုနဲ့ စီရျောနယျလျဒိုတို့ဟာ တဈခြိနျတုနျးက မှတျခကျြပေးပွာဆိုခဲ့ဖူးပွီး မျောရငျဟိုဟာ ရီးယဲလျအသငျးနညျးပွအဖွဈကိုငျတှယျခဲ့ခြိနျမှာ ဗာရနျးနဲ့လကျတှဲခဲ့ဖူးတဲ့အပွငျ စီရျောနယျလျဒိုကလညျး ရီးယဲလျအသငျးမှာ ဗာရနျးနဲ့အတူ ၂၀၁၁ ကနေ ၂၀၁၈ ခုနှဈအထိကစားခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ မျောရငျဟိုက “ဗာရနျးဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးနောကျခံလူလို့ ကြှနျတျောထငျပါတယျ။ သူ့အသကျက ငယျရှယျသေးပမေယျ့ ခွစှေမျးက ကမ်ဘာ့အဆငျ့ရှိတယျလို့လညျး ယူဆပါတယျ”လို့ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ စီရျောနယျလျဒိုကလညျး ၂၀၁၃ ခုနှဈတုနျးက AS သတငျးစာနဲ့အငျတာဗြူးမှာ “ဗာရနျးဟာ ခွစှေမျးတိုးတကျလာဖို့အတှကျ သငျယူစရာရှိတာတှေ အမြားကွီးသငျယူနပေါပွီ။ သူဟာ အသကျအရှယျအရ တညျငွိမျရငျ့ကကျြလာပွီဖွဈပါတယျ။ ဗာရနျးဟာ လငျြမွနျသလို၊ တညျငွိမျမှုရှိရှိနဲ့အမှားကငျးအောငျကစားနိုငျသူပါ။
အသကျငယျငယျလေးနဲ့ အတှအေ့ကွုံကောငျးတှအေမြားကွီးရှိနပွေီး မာနမရှိဘဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အမွဲတမျးနှိမျ့ခတြတျသူဖွဈပါတယျ။ လာမယျ့နှဈအနညျးငယျအတှငျးမှာ သူဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးနောကျခံလူစာရငျးဝငျကစားသမားတဈဦးဖွဈလာမယျဆိုတာ ကြှနျတျော သံသယမရှိယုံကွညျပါတယျ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၁ ခုနှဈတုနျးက ပွငျသဈကလပျလနျးဈအသငျးကနေ ရီးယဲလျအသငျးဆီပွောငျးရှခေဲ့သူ ဗာရနျးဟာ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့အတူအမွငျ့ဆုံးအောငျမွငျမှုတှရေယူခဲ့ပွီးဖွဈတဲ့အတှကျ စိနျချေါမှုအသဈတှကေို ရငျဆိုငျဖို့ ယူနိုကျဆကျအသငျးဆီ ပွောငျးရှခေဲ့တာပါ။ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ခံစဈမှာ မကျဂှိုငျးယားနဲ့တှဲဖကျကစားဖို့ ဗာရနျးကို ချေါယူခဲ့တာဖွဈပွီး ဗာရနျးအတှကျ ပွောငျးရှကွေ့ေးပေါငျ(၃၄. ၂)သနျးပေးခခြေဲ့ရသလို ခွစှေမျးနဲ့အောငျမွငျမှုအလိုကျ Add-Ons ကွေးအဖွဈ နောကျထပျပေါငျ(၈.၅)သနျး ပေးခရြေမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဗာရန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ မော်ရင်ဟိုနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ရီးယဲလ်အသင်းနောက်ခံလူဗာရန်းကို ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဗာရန်းဟာ အခုတစ်ပတ်အတွင်း အသင်းမှာဆေးစစ်မှုခံယူပြီးတော့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ ဗာရန်းဟာ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်(၄)ကြိမ်၊ လာလီဂါ(၃)ကြိမ်အပါအဝင် ဆုဖလားပေါင်း(၁၈)ခုအထိရရှိခဲ့သလို ပြင်သစ်အသင်းနဲ့လည်း ၂၀၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတာကြောင့် သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်လိုက်တာက ယူနိုက်တက်အသင်းခံစစ်အတွက် အကျိုးအများကြီးရှိစေတာအမှန်ပါပဲ။
ဗာရန်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘောလုံးလောကရဲ့နာမည်ကျော်တွေဖြစ်တဲ့ နည်းပြမော်ရင်ဟိုနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ဟာ တစ်ချိန်တုန်းက မှတ်ချက်ပေးပြာဆိုခဲ့ဖူးပြီး မော်ရင်ဟိုဟာ ရီးယဲလ်အသင်းနည်းပြအဖြစ်ကိုင်တွယ်ခဲ့ချိန်မှာ ဗာရန်းနဲ့လက်တွဲခဲ့ဖူးတဲ့အပြင် စီရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ဗာရန်းနဲ့အတူ ၂၀၁၁ ကနေ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိကစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ မော်ရင်ဟိုက “ဗာရန်းဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူ့အသက်က ငယ်ရွယ်သေးပေမယ့် ခြေစွမ်းက ကမ္ဘာ့အဆင့်ရှိတယ်လို့လည်း ယူဆပါတယ်”လို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းက AS သတင်းစာနဲ့အင်တာဗျူးမှာ “ဗာရန်းဟာ ခြေစွမ်းတိုးတက်လာဖို့အတွက် သင်ယူစရာရှိတာတွေ အများကြီးသင်ယူနေပါပြီ။ သူဟာ အသက်အရွယ်အရ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗာရန်းဟာ လျင်မြန်သလို၊ တည်ငြိမ်မှုရှိရှိနဲ့အမှားကင်းအောင်ကစားနိုင်သူပါ။
အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေအများကြီးရှိနေပြီး မာနမရှိဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲတမ်းနှိမ့်ချတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သူဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူစာရင်းဝင်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သံသယမရှိယုံကြည်ပါတယ်”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက ပြင်သစ်ကလပ်လန်းစ်အသင်းကနေ ရီးယဲလ်အသင်းဆီပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူ ဗာရန်းဟာ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့အတူအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုတွေရယူခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ယူနိုက်ဆက်အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါ။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ခံစစ်မှာ မက်ဂွိုင်းယားနဲ့တွဲဖက်ကစားဖို့ ဗာရန်းကို ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဗာရန်းအတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်(၃၄. ၂)သန်းပေးချေခဲ့ရသလို ခြေစွမ်းနဲ့အောင်မြင်မှုအလိုက် Add-Ons ကြေးအဖြစ် နောက်ထပ်ပေါင်(၈.၅)သန်း ပေးချေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။